Al-Shabaab hore oo la wareegay Baarlamaanka | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab hore oo la wareegay Baarlamaanka
Xildhibaanka ayaa sheegay in xubnaha Al-Shabaab ay ahaayeen kuwa tababar lagu soo siiyay saldhiga Sarindi.
MUQDISHO, Soomaaliya - C/llaahi Axmed Nuur, oo ah Xildhibaan kamid ah Gollaha Shacabka ayaa sheegay in Al-Shabaab hore oo lagu soo tababaray saldhigga Sarindi in Maanta la wareegeen xarunta Baarlamaanka.
Xildhibaan Cabdullaahi ayaa katirsanaa Xubnaha Mucaaradka ee maanta is-hortaagga ku sameeyay Mooshinkii Farmaajo usoo dhiibay Mursal ee la doonayay in loo hoos geliyo Xildhibaanada kadibna si kedis ah lagu meel-mariyo.
In Xildhibaanada amnigooda khatar la geliyay ayuu sheegay, isagoo intaasi ku daray in la dhowri waayay xasaanadii Baarlamaanka oo Askar lagu soo dhex daadiyay, kuwaasoo loogu tala-galay in lagu aamusiyo mudaniyaasha codkooda ka dhiibanaya mooshinada qarsoon.
"Suurta-gal ma ahan in iyadoo COVID-19 laga hadlayo 200 oo askari oo hubeysan, oo waliba ah kuwii loo tababaray inay dadka dilaan in halkan lagu soo xareeyo, waxaan dhahnay gudoomiye ma jirto sabab loo keeno Ciidankan aan naqaano waxa ay yihiin ee naga saar...Wuxuu nagu handaday gudoomiyuhu inuu berri askar intaan ka badan la imaan doono," ayuu yiri Xildhibaan C/llaahi Axmed Nuur.
Wuxuu sheegay Xildhibaanka in Ciidanka maanta la geeyay xarunta Villa Hargeysa uu dhaliyay shakiga in Mudo korarsi labo sano ah loo sameynayo Farmaajo, kadibna ay kahor tageen Xildhibaanada Mucaaradka taasoo keentay in buuq iyo fowdo meesha ka billaabato kadibna lagu kala tago.
Wixii Maanta ka dhacay Villa Hargeysa waxay qabsadeen baraha bulshada oo aad loo dhex wareejinayo Muuqaallada Xildhibaano caytamaya oo dumar u badan kuwa isku eedeynaya Imaaraadka baad u shaqeysaan iyo dal shisheeye.
Baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday December 2020 ayuu Farmaajo doonayaa inuu mudo-kordhin u sameeyo, waxaana ka shaqeynaya qorshihiisa Mursal oo July 25, 2020 Khayre 7 daqiiqadood xilka uga qaaday.